Zvese Zvikonzero Nei Yako YouTube Yekufamba Chiteshi Isiri Kukura - GoViral
musha » Zvese Zvikonzero Nei Yako YouTube Yekufamba Chiteshi Isiri Kukura
Kana zvasvika pakufamba chiteshi paYouTube, pane zvingori zvakawandisa kuverenga. Nepo mamwe acho achikura zvisingaite, mazhinji acho anoita kunge akamira, pakupedzisira achidzikira pasina kuita mucherechedzo. Kana iwe uine yako chaiyo yekufambisa chiteshi paYouTube isiri kufamba zvakanyanya mushe, panogona kunge paine zvikonzero zvishoma kumashure kwayo. Asi ndezvipi? Uye iwe ungachinje sei chiteshi chako hupfumi? Verenga pamusoro kuti uwane.
1. Uri kutevedzera manyorerwo ebudiriro yekufamba YouTuber
Ose anobudirira YouTuber ane yake / yake siginecha maitiro ekutaura, kuvhota, kugadzirisa, nezvimwewo Kunyange zvazvo aya masitayera achivashandira, vachifunga kuti vachakushandira ndeimwe yemakanganiso makuru aunogona kuita seYouTuber. Icho hunyengeri ndechekutsvaga rako rako izwi, rinozokuisa parutivi kubva kune vamwe vese. Chokwadi, unogona kutarisa kune mamwe maTubers kukurudzira, asi kutevedzera kana kutevedzera haisiyo nzira yekuenda.
2. Iwe uri kutarisa kunzvimbo dzekugara dzakatovharwa zvakanaka
Vazhinji vanotanga kufamba YouTubers vanofunga kuti nzira yakanakisa yekuwana kutariswa kwevaoni ndeyekuita mavhidhiyo kunzvimbo dzinozivikanwa. Nekudaro, chokwadi ndechekuti nzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzakatove dzakafukidzwa nezvakanakisa mubhizinesi. Panzvimbo pekugadzira mavhidhiyo munzvimbo dzisingade nhanganyaya, edza uye uwane nzvimbo dzekurovera uye ugovane zvaunoona pane ese iwo.
3. Uri kushandisa michina yechinyakare
Kuva neiyo inodhura kamera giya haisi vimbiso yekuti yako yekufamba chiteshi ichaona kubudirira. Nekudaro, kana iwe uri kushandisa yechinyakare michina, ako mavhidhiyo anozove ave akaderera-emhando izvo hapana munhu achazoda kuona. Nekudaro, edza nekukwiridzira giya rako nguva nenguva usingadhonze homwe dzako dzakaoma. Semuenzaniso, mune ino nguva yeDSLRs, GoPros uye drones, mavhidhiyo efoni haangazvigure.
4. Hausi kupa kukosha kwakaringana
Saka wakaenda kune imwe nzvimbo ndokugadzira vhidhiyo inotaridzika pairi, asi iwe uchiri mupfupi pane anotarisirwa maonero uye zvaunofarira. Chii chingave chakakanganisika? Pane mukana wepamusoro wekuti vhidhiyo yako haina kurongedza ruzivo rwakakwana. Hunhu hwakanaka hwevhidhiyo hwakakosha - hapana mubvunzo nezvazvo. Nekudaro, iwe zvakare unofanirwa kupa kukosha kune vateereri vako kuburikidza neruzivo rwakanangana nemaitiro ekusvika kwairi kuenda uye nemitengo inosanganisirwa.
5. Mharidzo yako haikodzeri hunhu hwako
Kune nzira dzakawanda dzinonakidza dzekugadzira dzinoshamisa mafambiro ekufamba. Nekudaro, iwo aunonamatira anofanirwa kukodzera zvauri iwe semunhu uye nehunyanzvi hwaunayo. Semuenzaniso, kana iwe usiri kujairana kwazvo nekugadzira cinematic yekufambisa mavhidhiyo, iwe unofanirwa kunamatira kune vlogging. Chokwadi, unogona kukwesha hunyanzvi hwako gare gare, asi kwenguva iripo, ita zvaunoita zvakanyanya.
6. Uri kuedza kuita zvakawandisa panguva imwe chete
Kuita mhando dzakasiyana dzemavhidhiyo ekufambisa kuitira chete kuti uwane mamwe maonero izano iro vazhinji vanoshandisa YouTubers vanoshandisa. Nekudaro, kana iwe uchingotanga chete, tinokurudzira kudzora kure neiri zano. Mumatanho ekutanga, namatira kune imwe niche. Semuenzaniso, kana iwe uchida chikafu uye kufamba, unogona kusanganisa izvo zviviri zvinhu uye unamatira kune yako sitayile kusvikira iwe uine chakakura chinotevera. Kana uchinge wazvisimbisa iwe, unogona kusiyanisa zvemukati wako uye kuyedza zvimwe.
7. Hausi kuenderana
Kiyi yekubudirira paYouTube iri mukugadzikana kwaunogona kuve nako nekukanda kwako. Zvichitaurwa zviri nyore, kurodha toni yemavhidhiyo mwedzi mumwe uye kushayikwa kune inotevera hakuzoite. Nekudaro, zvakakosha kuti uronge zvinhu zvese zvisati zvaitika. Semuenzaniso, kana iwe urikugadzira akateedzana pane imwe nzvimbo, isa nzvimbo zvikamu kuitira kuti vakwanise kuteedzerwa nekukasira neimwe nhevedzano inotarisa kune imwe nzvimbo yekuenda.
GoViral chishandiso chinobvumidza YouTubers kuwana mahara YouTube vanyoreri, maonero, kufarira, uye makomendi. Iwe unofanirwa kunyatso funga kuishandisa kuti utore yako YouTube yekufamba chiteshi kubva kune yakajeka kutanga.
Zvese Zvikonzero Nei Yako YouTube Yekufamba Chiteshi Isiri Kukura neGoViral Chikwata Chekunyora, 13 September 2021